Eritrea oo maanta Cunaqabateynta hubka laga qaadayo – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAEritrea oo maanta Cunaqabateynta hubka laga qaadayo
November 14, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Eritrea oo maanta Cunaqabateynta hubka laga qaadayo
Saacadaha soo socda ayaa lagu waddaa in xubnaha Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ay u codeeyaan in dowladda Eritrea laga qaado cunaqabateynta hubka ee horay loogu soo rogay.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in kala diray Kooxdii Dabagalka Soomaaliya iyo Eritrea u qaabilsaneyd Qaramada Midoobey.
15ka Dal ee Xubnaha ka ah Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa soo jeediyay in cunaqabateynta hubka laga qaado dowladda Eritrea ,waxaana ay u baahantahay kaliya 9 cod oo ka mid ah 15ka Cod.
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobey ayaa Eritrea cunaqabateyn saaray sanadkii 2009kii,markaas oo lagu eedeeyay in ay faragelin ku heysay dalalka deriska la ah sida Jabuuti iyo Soomaaliya oo lagu eedeeyay in ay AL-shabaab taageerto.
Eritrea ayaa diiday dhamaan eedahaas,waxaana Qaraar Qabyo ah oo ay soo gudbisay Dowladda Ingiriiska la isku raacay in maanta cunaqabateynta Hubka,Socdaalka iyo dhaqaale laga qaado Eritrea.
Dowladdaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa u ololeeyay in dowladda Eritrea laga qaado Cunaqabateynta Hubka, ka dib markii uu heshiis dhexmaray Eritrea iyo waliba dowladda Itoobiya.
Toogasho ka dhacday Boosaaso
941,989 total views, 2,114 views today
941,989 total views, 2,114 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
941,860 total views, 2,114 views today
941,860 total views, 2,114 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
941,893 total views, 2,115 views today
941,893 total views, 2,115 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
941,961 total views, 2,114 views today
941,961 total views, 2,114 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
942,000 total views, 2,114 views today
942,000 total views, 2,114 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]